Pocket FM အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - APKTom
4.2 | 10,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် XAPK（14.2MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Pocket FM - Stories, Audio Books & Podcasts
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏နံပါတ် 1 ရေဒီယိုက app, Pocket FM ကသင့်အားအကောင်းဆုံးဟိန္ဒူရေဒီယိုပြပွဲများ, ဟိန္ဒူအာဏာပိုင်များ, ဟိန္ဒူ FM ရေဒီယိုလိုင်းများ, Pocket FM တွင်အိန္ဒိယရေဒီယိုအစီအစဉ်များ, အိန္ဒိယပုံပြင်များသို့မဟုတ်အိန္ဒိယကေဂရမ်သို့မဟုတ်အိန္ဒိယအသံဖမ်းပွဲများ, အိန္ဒိယအသံစာအုပ်များသို့မဟုတ်အိန္ဒိယအသံစာအုပ်များပါ0င်သည်။ Mornio, Triller, ပြီးတော့အများကြီးပို။
Pocket FM တွင်စာအုပ်စာတမ်းများတွင်သင်စာအုပ်စာကြည့်တိုက်တွင်တွေ့ရမည့်အိန္ဒိယစာအုပ်များအားလုံးရှိသည်။ စာအုပ်စာကြည့်တိုက်တစ်ခု၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအိမ်၏သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်စာအုပ်စာတမ်းများကိုသင်ပျော်မွေ့နိုင်သည့်စာအုပ်စာကြည့်တိုက်သို့သွားရန်မလိုအပ်ပါ။ ဤပုံပြင်များကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအခမဲ့ဖြစ်သည်။
Pocket FM တွင်သင်စဉ်းစားနိုင်သည့်အိန္ဒိယအသံစာအုပ်များ, အကောင်းဆုံးရောင်းသူများ, ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစာအုပ်များ, အဆိုပါမိန့်ခွင်ထိုး - ဖတ်။ ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကတော့ဒီဟာကစာအုပ်တွေအားလုံးဟာအခမဲ့ဖြစ်ပြီးကုန်ကျစရိတ်အခမဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Audio စာအုပ်များသည်စာအုပ်ကိုပိုမိုပျော်စရာကောင်းနေရုံသာမကထူးဆန်းသောဖျော်ဖြေရေးရင်းမြစ်လည်းဖြစ်သည်။ Audio စာအုပ်တွေကမင်းကိုအသစ်အဆန်းတွေအများကြီးအကြောင်းလေ့လာဖို့, မင်းကိုအများကြီးစမတ်ကျပြီးသတိထားမိစေတယ်။ သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်သင်ဖတ်ရှုသောအသံစာအုပ်များနှင့် ပတ်သက်. လည်းမျှဝေ။ ဆွေးနွေးနိုင်သည်။
Hebsal, Marathi, ဘင်္ဂါလီ, ဂူးဘူတီနှင့်အခြားဒေသဆိုင်ရာ FM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများ, အိန္ဒိယ FM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများအားလုံးလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ FM ရေဒီယို, အွန်လိုင်း FM ရေဒီယိုနှင့်ပိုမိုများပြားလာသည်။
B> Back Realing Music
ညအချိန်တွင်အိပ်ရန်အခက်အခဲရှိပါသလား။ Pocketfm တွင်ညအချိန်တွင်အိပ်စက်ခြင်းကိုကူညီရန်ကူညီမည့်တေးဂီတကိုအပန်းဖြေရန်ကျယ်ပြန့်စွာရွေးချယ်မှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုရန်အထောက်အကူပြုသောအရာများစွာကိုသုတေသနပြုချက်များစွာအပြီးတွင်အပန်းဖြေအနားယူခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Pocketfm တွင်တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းတေးဂီတတွင်သင်၏မြန်ဆန်သောဘဝတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရရှိစေလိမ့်မည်။ ဤဖျန်ဖြေခြင်းဂီတကိုနားထောင်ပြီးသင်၏ဘဝကိုထိန်းချုပ်ရန်နားထောင်ပါ။
English Weating သင်တန်း
English စကားပြောနေတာကိုသင်မယုံကြည်ဘူးလို့သင်ခံစားဖူးပါသလား။ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ Pocket FM သည်သင့်အားအကောင်းဆုံးအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားမှုသင်တန်း (အင်္ဂလိပ်စာဖြင့်လေ့လာခြင်းဖြင့်) သင့်အားအချိန်မရွေးသင်ကြားခြင်းနှင့်စကားပြောခြင်းကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ဒီတော့ဘာကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့စောင့်နေတာလဲ။ ဒီအခမဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာပါ။
သင်နားထောင်နိုင်ပြီး podcasts များကိုလည်းဖန်တီးနိုင်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝနှင့်အခြားသူများ၏တိကျသောဘဝပုံပြင်များအကြောင်း Podcasts များရှိသည်။ Pocket FM တွင်အိန္ဒိယ podcasts အမျိုးမျိုးတွင်သင်ချစ်မြတ်နိုးရလိမ့်မည်။ သင်၏အသံကို Voice Recorder ကိုကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူ အသုံးပြု. သင်မျှဝေရမည့်အရာကိုသိပါစေ။ podcasts ဒီတော့သူတို့ကသင်၏ Podcast တခုကိုအကြောင်းကိုခံစားရသင်သည်အဘယ်သို့ပြောပြနိုင်ကြောင်းလူတွေရှင်းလင်းစွာသင်နားလည်ရန်လွယ်ကူစေခြင်းနှင့်ရှယ်ယာမှတ်ချက်။
ငါတို့သည်လည်းအပေါငျးတို့သပူဇော် ငါတို့ကြီးပြင်းလာတဲ့ပုံပြင်တွေဒါမှမဟုတ် Kahaniya ။ သင်သည်ဤပုံပြင်များသို့မဟုတ် Kahaniya ကို download လုပ်ရန်အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်၎င်းကိုသင်အော့ဖ်လိုင်းရှိသည့်တိုင်၎င်းတို့ကိုသုံးနိုင်သည်။ Akbar Birbal, Vikram Betal ကဲ့သို့သောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပုံပြင်များကိုနားထောင်ပါ။ အချို့ကသင့်အားပြောပြသည်။ ဤဟိန္ဒူပုံပြင်များသို့မဟုတ်ဟိန္ဒူ Kahaniya သည်အတွေ့အကြုံများကိုပိုမိုပျော်စရာကောင်းအောင်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ RJS အားဖြင့်သင့်အားပြောပြသည်။ မင်းပျော်မွေ့ဖို့ပုံပြင် 12000 ကျော်ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ပုံပြင်များထပ်မံထည့်သွင်းလျက်ရှိသည်, ဒါကြောင့်ပုံပြင်အသစ်များအတွက်မျက်စိကိုစောင့်ရှောက်လော့။
ဘာအသစ်လဲ Pocket FM - Stories, Audio Books & Podcasts 5.1.4
Hindi News Live TV | Live News Hindi Channel